မစ် messenger - အလုံခြုံဆုံး, စိတ်ချအရဆုံး messenger
အလုံခြုံဆုံး, စိတ်ချအရဆုံး messenger
အခြားသော messengerများနှင့်မတူပဲ, မစ် messengerရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးက Encryption နည်းပညာလို့ခေါ်တဲ့ ကြားခံ Server လုံးဝမရှိပဲ ကိရိယာတစ်ခုမှကိရိယာတစ်ခုသို့ပဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများကို ဘယ်Server ပေါ်မှာမှ မသိမ်းထားနိုင်ပါ။ အဲဒါကြောင့် မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးက မသမာခိုးယူသူများလက်မှလုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသည်။
Or click here to download mit messenger APK file
မစ် messengerကို ၅သောင်းကျော် downloadလုပ်ပြီပါပြီး!
မှားပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများကို အလွယ်တကူ ပြန်ဖျက်နိုင်သည်။
မစ် messengerမှာ 'အားလုံးအတွက်ပြန်ဖျက်လိုက်ပါ' feature ရှိသည်။
မှားပို့ လိုက်တဲ့မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဆို အလွယ်တကူပြန်ဖျက်နိုင်သည်။
၇မိနစ်စာအသံcallကို 1MB လောက်ပဲကုန်သည်။!
< အခြား messenger app >
HD/VoLTEအရည်သွေးမှီcallsများကိုဒေတာအကုန်ကျအနည်းဆုံးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဖုန်းလိုင်းခဏခဏပြတ်သွားတာမျိုးလည်း မစ်messengerမှာ မတွေ့ကြုံနိုင်ပါ။
Dapp Configurations (တည်ဆောက်ပုံ)
and Features (အင်္ဂါရပ်များ)
မစ် messenger က အခြား app လမ်းကြောင်းများနှင့်လည်း အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဥပမာ. Ethereum, Quantum, စသဖြင့်
online to offline (O2O)နှင့်ဆက်စပ်နေသော မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု လမ်းကြောင်းများကိုလည်းပေးသည်။။
Uber, Grab, Didi Chuxing.
Rental Platform (ငှားရမ်းမှုလမ်းကြောင်း)
online to offline (O2O)နှင့်ဆက်စပ်နေသော မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု လမ်းကြောင်းများကိုလည်းပေးသည်။ ဥပမာ. AirBnB.
Music Streaming (ဂီတစီးကြောင်း)
Bingo Music လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဒစ်ဂျစ်တလ် ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုစီးကြောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။
အရောင်းအ၀ယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုများလိုနေတဲ့ expert အဖွဲ့နှင့်လည်း မစ် messengerကနေပြီးအလွယ်တကူဆက်သွယ်ပေးသည်။
Cryptocurrency Wallet (ဒစ်ဂျစ်တလ်ပိုက်ဆံအိတ်)
အလုံခြုံဆုံး မစ် messenger
Encryption နည်းပညာလို့ခေါ်တဲ့ ကြားခံ Server လုံးဝမရှိပဲ ကိရိယာတစ်ခုမှကိရိယာတစ်ခုသို့ပဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများကို ဘယ်Server ပေါ်မှာမှ မသိမ်းထားနိုင်ပါ။
မစ် messengerက အခြားသော messengerများထက် (၆)ဆ လောက်ဒေတာအကုန်သက်သာပါသည်။
Encryption နည်းပညာလို့ခေါ်တဲ့ ကြားခံ Server လုံးဝမရှိပဲ ကိရိယာတစ်ခုမှကိရိယာတစ်ခုသို့ပဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်သင်ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးက ကြားခံမသမာခိုးယူသူများလက်မှလုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသည်။
/ Speed (အမြန်နှုန်း)
ဆန်းသစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနှင့်ဒွိစုံကိန်းကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့်ပေးပို့ခြင်း, မစ် messengerက မက်ဆေ့ခ်ျများကို အခြားသော messengerများထက်ပို၍ အမြန်နှုန်းဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်။
/ အမျိုးမျိုးသော သတိပေး လုပ်ဆောင်ချက်များ
ဤလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် မစ် messengerက သင်ကိုစကားဝှက်(Password)ထားခိုင်းလိမ့်မည်။
/ မစ် messengerသော့ခတ်
/ Super Group Chat Room (Superအဖွဲ့ chatအခန်း)
(Paid Service Function)
/ QR Code စနစ်နဲ့ သူငယ် ချင်းများကို Addနိုင်သည်
သင်သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖုန်းပေါ်က QRCodeကို သင်ရဲ့ဖုန်းကင်မရာနဲ့scanပြီး အဲဒီသူငယ်ချင်းကို Addနိုင်သည်။
ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုတင်ချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် ပုံအရည်အသွေးနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုထိန်းညှိစနစ်က လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
/ Send as Gift Function (လက်ဆောင်ပေးပို့စနစ်)
ဤစနစ်ကတဆင့် လက်ဆောင်ပုံစံအမျိုးမျိုး/ကူပွန်တို့ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုလည်းလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့နိုင်သည်။
/ Company Gift Box Function (ကုမ္ပဏီ လက်ဆောင်ပုံးစနစ်)
/ တစ်ဦးချင်းဆီအတွက် ကိုယ်စားပြုနံပါတ်များပေးသည်
သင်ရဲ့လုံခြုံမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ အခြားသော messengerများနဲ့မတူပဲ,
ပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ နှင့် သင်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို ဘယ်Server ပေါ်မှာမှ မသိမ်းထားနိုင်ပါ။
အဲဒါကြောင့် စိတ်ချလက်ချ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။